Ukuphupha ngeLaub Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amagqabi emithi abonisa ukutshintsha kwamaxesha onyaka. Amagqabi okuqala entwasahlobo athambile kwaye aluhlaza ocacileyo. Yomelele kwaye imnyama ngombala, i-canopy ibonelela ngomthunzi kwiintsuku zasehlotyeni ezishushu. Kwaye ekuweni, onke amacandelo omhlaba akhanya ebomvu kunye negolide de amagqabi ekugqibeleni ajika abe mdaka kwaye ufuna ukugubungela umhlaba.
Ihlobo elidumileyo laseIndiya litsala izihlwele zabakhenkethi eMntla Melika ngobuhle obumangalisayo bemithi eqaqambileyo. Ekwindla nasebusika, iimfumba zamagqabi aqokelelwe ngumoya okanye ngezandla zomntu anikezela ngendawo efudumeleyo nekhuselekileyo yeehedgehogs, izinambuzane kunye nezirhubuluzi.
Iphupha malunga namahlamvu kunokuba ngamava omzimba. Awupheleli nje ekuboneni amagqabi anemibala eyahlukeneyo, unokuwava erhashaza okanye erhwashazayo. Kwaye inokuvula noluvo lwevumba. Unxibelelwano lubalulekile ekutolikeni kwamaphupha: Amagqabi akhangeleka njani? Ngaba ngamagqabi athile, umzekelo amagqabi e-oki? Ngaba basajinga emthini okanye sele bewile?
1 Uphawu lwephupha «amagqabi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli sephupha "sishiya" - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amagqabi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amagqabi» - ukutolikwa ngokubanzi
Amahlamvu luphawu lwamaphupha ekuchazeni iphupha. utshintsho y ukudlula. Ibonisa ukuba into entsha ivela kwimeko yobomi okanye kubuntu bephupha.
Kwangelo xesha, iphupha kufuneka liqondwe njengesikhumbuzo sokuba yonke into ekhoyo iya kuphinda yenzeke. Nokuba utshintsho olubhengeziweyo kwisimboli yamaphupha lunje. into yethutyana. Izidingo kunye namathemba abavusayo abonakalisiwe kumagqabi entwasahlobo ahluma. Ukuba amagqabi asehlotyeni yejusi eluhlaza ephupheni, zibonisa iindlela ezintsha kunye namathuba ekutolikweni kwephupha.
Ukuba amagqabi sele abunile okanye ukuba asemhlabeni, uphawu lwephupha luquka iingcinga kunye neemvakalelo zokufa. Isigaba sokungazivelisi, sokuphoxeka kunye namaxhala sisondele. Amagqabi ajikwa ngumoya akhomba ukutolikwa kwephupha. ubuqina bengqondo yokuphupha. Mhlawumbi ngoku uphoswa yindawo ekubhekiswa kuyo ebomini.
Ukuba ubona amagqabi amaninzi ephupheni, ibonisa iintlobo ngeentlobo zeengcinga kunye nemibono. Ngokunokwenzeka ukuphupha uwedwa kunamandla amaninzi okudala.
Isimboli sephupha "sishiya" - ukutolikwa kwengqondo
Kwimeko yezengqondo, uphawu lwephupha "lishiya" luquka iinkqubo zengqondo ekuchazeni amaphupha. Uhlobo lwamagqabi lubonisa ukuba utshintsho lweemvakalelo okanye lwengqondo lukhawulezile okanye luyanyamalala.
Ukuvela kubonakala kumagqabi amatsha, aluhlaza kwisebe. Uthando lobomi wephupha elibonakalisiweyo. Uziva ulungelelene ngokwengqondo kwaye ujonge phambili kwikamva lakho kunye nophuhliso lomntu.
Imithi egcwele amagqabi ekwindla ifumaneka kutoliko lwamaphupha e amavaukuba ukuphupha kwenziwe ngaphambili kwaye kubumba ukucinga kwakho ngoku kunye nokwenza.
Ukuba uphawu lwephupha "amahlamvu" abunile, lubonisa ukudlula. I-subconscious ithi ndlela-ntle kwiimvakalelo ezithile kunye nemibono ephupheni kwaye kwangaxeshanye ivulela ukubonakala okutsha.
Uphawu lwephupha «amagqabi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "amahlamvu" afuzisela ukutolikwa kwamaphupha kungekuphela nje ukudlula, kodwa ikwabonisa ukuchuma nokukhula. Yonke into ixhomekeke kutshintsho rhoqo, zombini el mundo izinto ezifana nokomoya.
Kwinqanaba lokomoya, amagqabi ephupheni ikwaluphawu lokuhlala uhleli ukuvuselelwa ngokomoya.